Semalt: Karazana fandàvana ny tolotrasa (DoS) fanafihana
Ny fanafihan'i DoS dia fanandramana ratsy natao hametrahana ny lohamilina na loharanon-tserasera tsy maharitra na tsy maharitra. Ny hackers dia manatanteraka io asa io amin'ny alalan'ny fanaovana asa fanompoana samihafa. Vokatr'izany dia afaka manakana na manapaka ny kaontinao mandritra ny androm-piainany izy ireo. Ny famelezana ny tolon'ny serivisy dia midika fa misy milina maromaro maromaro ampiasaina amin'ny famokarana solosaina sy fitaovana finday vaovao. Ireo milina ireo dia miteraka vulnerabilities isan-karazany ary manondraka ireo loharanom-pifaninanana miaraka amin'ny fangatahana, fangatahana, ary hafatra tsy mila. Ny fanafihan'ny DoS dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitaovana ampiasainao ary matetika ampiasaina amin'ny botnets.
Andrew Dyhan, Semalt Mpitarika Success Manager, dia milaza fa ny fanafihana DoS dia mizara ho sokajy roa samihafa:
1. Fampihorohoroana fanafihana DoS
Ity karazana fanafihana DoS ity dia ahitana ny tondra-drano HTTP, ny fanafihana tsy mitongilana na ny fanafihana mitohy (Slowloris na RUDY). Ity fanafihana DoS ity dia mikendry ny hamaha olana maro ho an'ny rafitra opera maro, ny protocols amin'ny serasera, ary ny rindrambaiko web. Toa tsy manan-tsiny sy ara-drariny izy ireo, ary mendri-piderana ny fangatahana, fa ny halehiben'ny halehibeny dia refesina amin'ny fangatahana isan-tsegondra..Ity fanafihana DoS ity dia mikendry ny handresy ireo fampiharana voatokana amin'ny fangatahana maro, miteraka fahatsiarovana sy fampiasa CPU. Hanafatra na hampiakatra ny fampiharana amin'ny ordinateranao izy amin'ny farany.
2. Fikirakirana ny tambajotra DoS
Ny atin'ny angovo DoS ny fanafihana dia ny tondra-drano UDP, ny tondra-drano SYN, ny ambaratonga NTP, ny fanamafisana ny DNS, ny fanamafisana ny SSDP, ary ny fifindran'ny IP. Izy ireo dia barrage rehetra avo lenta ary avoaka amin'ny gigabits isan-tsegondra. Izy ireo koa dia heverina ho endriky ny fonosana isan-tsegondra ary novonoin'ireo solomason'ny zombie na botnets foana.
Ahoana no nielezan'ny fanafihan'ny DoS?
Miezaka ny hanafika sy hifehezana olona an-jatony an'arivony maro, na dia smartphones sy ordinatera an-tapitrisany aza ireo mpampiasa cyber. Te-hiasa toy ny tompon'ireo tambajotra sôbôla na orinasa botnet izy ireo ary mametraka ny fanafihana an-tserasera (DDoS) misahana ny sori-dalana, fampielezan-tsarimihetsika goavam-be, ary fanafihana hafa amin'ny cyber. Amin'ny toe-javatra sasany dia mametraka tambajotra goavam-be sy matihanina amin'ny aterineto ireo cyberprisonniers mba hiditra amin'ireo tambajotra vaovao sy fitaovana, na mivantana na amin'ny toeran'ny hofaina. Mety hanofa sy hividy ireo tambajotra ireo spamers mba hikarakarana ireo fampielezan-tsarimihetsika goavana.
DoS botnets sy ny fitaovany:
Ny mpamorona ny botnet dia antsoina hoe herder bot na botmaster. Manara-maso ny DoS botsaka avy amin'ny toerana lavitra izy ary manome andraikitra sasantsasany amin'izy ireo isan'andro. Ireo mpampiantrano dia mifandray amin'ny server DoS amin'ny alàlan'ny fantsona miafina toy ny protocoles tsy manan-tsiny, HTTP tranonkala sy tambajotra IRC. Mety hampiasa tranonkala media sosialy toy ny Twitter, Facebook, ary LinkedIn izy mba hifanerasera amin'ny hafa.
Ny serasera botnet dia afaka mifampiresaka na miara-miasa amin'ny tambajotra DoS sy ny servisy botnet hafa, ka mamorona tambajotra P2P mahomby izay tarihin'ny manam-pahaizana bot na sela. Midika izany fa tsy misy olona afaka manome torolàlana amin'ny tambazotran'ny DoS satria ny fiakaran'ny maro dia maro ary ny hackers ihany no mahalala ny fiaviany. Ireo gadra DoS dia miafina ao ambadik'ireo sampan-draharaha tsy dia mazava loatra ary maka tahaka ny manome ny mpanjifany amin'ny fitaovana maoderina, izay tena tsara ho an'ny tsy misy Source .